Lacag Bilaash ah oo Lagu Sameeyo Amazon, 4 $ Instant Pot Cookbook, $ 27 Wireless Headphones, $ 10 Anker Charger, iyo inbadan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Lacag Bilaash ah oo Lagu Sameeyo Amazon, $ 4 Instant Pot Cook Potbook, 27 $ Mashiinka Wireless-ka, $ 10 Anker Charger, iyo inbadan - BGR
Lacag Bilaash ah oo Lagu Sameeyo Amazon, 4 $ Instant Pot Cook Potbook, $ 27 Qalabka Warka Bilaashka ah, $ 10 Anker Charger, iyo inbadan - BGR
Waxaan ku xasuusinaynaa in Amazon ay rabto inay lacag kugu siiso. Maya, si dhab ah ... lacag la’aan! Soo Iibso Kaararka Hadiyadda ee Amazon oo qiimahoodu yahay $ 50 (oo aad xisaabtaada ku dari doonto si kastaba) iyo Amazon waxay ku siin doontaa amaah bilaash ah 15 $ hadaad gasho nambarka kuuban 19GIFTCARD Goobta Jeegaanta oo waligaa kuma iibsan kaararka hadiyadda goobta internetka Amazon kahor. Sidoo kale waad booqan kartaa this page oo guji batoonka si aad ugu adeegsato dallacgan koontadaada halkii aad gacanta ku geli lahayd kuubboonka.
Qaabka ugu sareeya Apple Watch Taxanaha 3 kaliya 229 $ Khamiista (Apple waxay kaliya hoos u dhigtay qiimaha 299 $, markaa waa dalab waali ah!), buugga wax lagu kariyo Dhoobada degdega ah ee leh cuntooyinka 500 loogu talagalay kaliya 3,99 $, iibiyaha ugu fiican Kordhinta fidalka Wi-Fi on Amazon for 15,99 oo keliya, taleefoonada gacanta ee runta ah ee gacanta lagu taabto sida AirPods ee loogu talagalay 27,29 $ marka aad isticmaaleysid koontada 'YIIZWMTK' marka laga hadlayo, aad u fiican dhawaaqa wireless ee kansal gareeyaha dhagaha loogu talo galay 39,99 $ markaad goosato kaararka goobta isla markaana isticmaal koodh kuuban oo ah ECQDWW3T, oo heer sare ah Dabka Chromebook u adkaysta kaliya 199,99 $, Qalabka iibka iibiyaha ee ugu wanaagsan ee Anker kaliya $ 9,99 oo leh koodh dallacsiin LABOR2503, oo ah iib xasaasi ah oo hal maalin ah oo kuu hela codsi iyo garaash leh albaab albaab furan taas oo rakibaysa daqiiqado loogu talagalay kaliya 47,99 $, Galax bilaash ah Dooro markaad doorato horay u cusub Samsung Galaxy A50 oo keliya 349,99 $ oo aan laga furin, a xirmo ee 18 Mac iyo Easy Mac cheese kaliya 4 $ iyo ka badan. Fiiri dhammaan heshiisyada maanta ugu fiican ee hoose.
Raac @BGRDeals on Twitter Si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeyay iyo kuwa ugu guulaha badan adduunka. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. Qaar ka mid ah deeqaha ayaa laga yaabaa inaysan u heli karin dhammaan macaamiisha. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Source source: AP / Shutterstock
Hooyo… wali si dhab ah ugama helin lacagtaada bilaashka ah ee Amazon? - BGR
Ku dar appka iyo xakameynta codka albaabkaaga garaashka loogu talagalay 48 $ oo leh iibintan hal maalin ah ee Amazon - BGR